मेरो कोखमा जन्मिनेछिन् बझाङकी सम्झना, नेपाली नारीहरुका लागि उनै लड्नेछिन् : सोनिका – Dainik Sangalo
October 1, 2020 200
कठमाडौं । कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको परिवारले अहिलेसम्म पनि न्याय पाउन सकेको छैन । यो घटनाले नेपालको अन्तराष्ट्रि रुपमा पनि कडा रुपमा आलोचना भइरहेको छ । निर्मला प्रकरणमा वर्ष बित्दा पनि सरकारले को दोषी हो भनेर पत्ता लगाउन सकिरहेको छैन ।
योबीचमा बझाङकी सम्झना कामी को घटना बाहिर आएको छ । जसले एक पटक फेरी सबै नेपालीहरुलाई सोच्न बाध्य बनाएको छ । वर्ष वितिसक्दा पनि निर्मला पन्त लाई न्याय दिलाउन नसकेका नेपालीहरु अहिले फेरि सम्झनाको न्यायका लागि लडिरहेका छन् । यो भिडमा लामो समयदेखि संघर्षरत सोनिका रोकायाले पनि सम्झनाको न्यायका लागि आवाज बुलन्द गर्दै आएकी छिन् ।
सोनिकाले फेसबुकमा लेखेकी छिन, ‘हार्दिक श्रदाञ्जिल सम्झना । मेरो विवाह भएछ भने सम्झनाले फेरी मेरो कोखबाट जन्म लिनेछ । सम्झना राख्नेछु छोरीको नाम र उ लड्नेछ नेपाली नारीहरुका लागी’ आज जिल्लाका केही राजनीतिकर्मी र विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूको सहभागितामा सम्झनाको अन्त्येष्टि गरिएको छ ।
सम्झना को घटनामा संलग्न मष्टा गाउँपालिका–२ का राजेन्द्र बोहरालाई मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत् सार्वजनिक गरेको थियो । आज भन्दा आठ दिन पहिले अर्थात ७ असोजमा मष्टा गाउँपालिका–२ खिकालाकी सम्झनाको लाश सिममन्दिरभित्र फेला परेको थियो । आज सरकारले दिएको १० लाख राहत र सम्झनाको लाश परिवारले बुझेको छ ।
योबीचमा सोनिकाले एक भिडियो सन्देश पनि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा राखेकी छिन् । भिडियोमा उनी भन्छिन्,‘ तिम्रो न्यायका लागि प्रत्येक दिन लागिपरेकी थिए । त्यसैले होला आज आकाश पनि हाँसेजस्तो लाग्यो । आज सम्झना विश्वकर्माको अन्तिम संस्कारमा हामी उपस्थित भएका थियौँ । मन एकदमै तरङ्गित भएको थियो ।’
Prevआज २०७७ असोज १५ गते बिहीवारको राशिफल
Nextसांसद सुदन किराँतीले तलबबाट विपन्नको छानो हालिदिए,अन्य सांसदले कहिले सिक्लान?,हेरी शेयर गर्नुहोस् ।
महोत्तरीमा नौ सशस्त्र प्रहरीसहित १४ जनामा कोरोना पुष्टि
जसपाको यो एक प्रश्नले झस्कायो प्रचण्ड–नेपाललाई ! (भिडियो)
बैतडीमा कलेज हिँडेकी किशोरीको शव जंगलमा यस्तो अवस्थामा भेटियो, कसरी भयो उनको मृत्यु? (126132)
यस्ता थिए लाहुरे र स्मिताका रमाइला टिकटक जुन यादमै सिमित रहेदेशै रुवायो हेर्नुस भिडियो (96470)
दुबई का’ण्ड भन्दै यी युवतिको हेर्नै नसकिने ३ मिनेट ४४ सेकेन्डको भिडियो सार्वजनिक( भिडियो हेर्नुहोस) (73500)
जति सुकै बिजिभए पनी केबल २ मिनेट समय दिएर अवस्य पढ्नुहोला ! (68838)
बल्ल प्रहरीले २४ घन्टामै भागरती ह#त्या,रा​ प’त्ता लगायो।गाउकै मान्छे रहेछ (63939)
हेर्नुस्, नेपाली सेनाको यस्तो क:’ठोर….. ; जुन भिडियो अहिले संसारभरी भाइरल भइरहेको छ (भिडियो हेर्नुस) (54685)
दुखको खबर !! अनिताको अप्रेशन सफल हुन सकेन अब के होला ? बिनोद रुदै मिडियामा आए (49745)
भर्खरै हेर्नुस भा’गीरथीको ह,त्यारा लाई यस्तो अवस्थामा प्रह’री द्वारा के गरियो, भिडियो सहित (43413)
खुसिको खबर – सोच्नै नसकिने गरि ह्वात्तै बढ्यो वृद्धभत्ता !!! (41662)